Rajada & cadadka soo saarka shidaalka ee ceelka Shabeel 1 oo ka saraysa sidii la filayey. – Radio Daljir
Rajada & cadadka soo saarka shidaalka ee ceelka Shabeel 1 oo ka saraysa sidii la filayey.
Bosaso, Mar 4 – Waxaa si hasbami ah uga soconayo dooxada Dharoor ee gobolka Bari qodaalka shidaalka ugu horeeyay ee laga soo saaro wadanka Soomaaliya.
Shirkadda African Oil oo saldhigeedu yahay dalka Canada ayaa bartamihii bishii Janaayo ee sanadkan ka bilowday deegaanka Dharoor qodista ceelkii ugu horeeyay ee la filayo in shidaal laga soo saaro,kaasi oo loogu magac daray Shabeel 1.
Saraakiisha u xilsaaran soo saarka shidaal ee laga wado dooxada Dharoor ayaa sheegaya rajada laga qabo in shidaal la soo saaro ay tahay mid aad u wanaagsan, dhowaana la filayo in shidaal la soo saaro.
Shacabka Puntland ee ku sugan dalka iyo dibadda ayaa soo dhoweeyay howlaha lagu soo saarayo shidaalka Puntland.
Shirakadaha ku hawlan shidaalka laga soo saaro Puntland ayaa shaaciyay qiyaas ahaan afar boqol oo bilyan oo fuusto shidaal ah in laga soo saari doono ceelka Shabeel 1.